I-India CCTV yemakethe yemakethe yekhamera ye-2016 - Ucwaningo kanye nezimakethe
Ngokusho kwe-India CCTV Camera Bazaar Overview, i-India CCTV Camera Bazaar yamukelwa ukuba ivalwe yi-27.16% ku-Aeon kusuka ngo-2016 t ...
Ngokusho kwesibukezo se-India CCTV Camera Bazaar, i-India CCTV Camera Bazaar yamukelwa ukuthi ivalwe nge-27.16% ku-2021. Ubuchwepheshe be-Astute Non-IP bubusa i-Indian Bazaar kodwa ngempumelelo ukuletha kusengaphambili ngokushesha. Ubuchwepheshe be-non -ip bubandakanya amakhamera we-analog kanye ne-HD CCTV. I-Analog yibuchwepheshe obusesikhathini sokuqothula futhi ukwamukelwa kwamukelwa ukuthi kuthathwe ubuchwepheshe be-IP kanye nekhamera ye-HD Blazon CCTV.
Amakhamera athayipheni ama-dome athayipha amakhamera amaningi asolwa kakhulu kunoma yimiphi imikhakha. Ukuhlobisa okuhlanganisiwe ngumfundisi we-CCTV Bazaar eNdiya ukubalwa kwe-soho's ne-SME's. Ngokukhathazeka kwe-accretion aegis, indawo yokuhlala ngabe iyokunye kwezinto zemakethe ye-accretion. Njengoba imisebenzi ebekiwe yengezwa e-Arctic Arena yase-India, eNyakatho iphethe iBazaar ngesivumelwano semali engenayo.
Ngokusho kwabadlali abaguqulwa kwezobuchwepheshe bakhona emakethe. Ekuhlolweni okungekhona kwe-IP I-bazaar iqukethe abadlali abanjenge-CP Plus, Dahua kanye ne-PRAMA HIKVision okuyisisekelo okungezwe ngama-70% emakethe. Kanti uma kwenzeka kunesihloko se-IP i-bazaar iqukethe ukuxhumana kwe-axis, i-bosch, i-panasonic, i-honeywell, njll. Ukusetshenziswa okungenamkhawulo kwekhamera ye-CCTV kwizimboni ezivuselelwayo njengemikhakha kaHulumeni, i-SOHO's ne-SME'S, ukubhenka, izihambi kanye nokungenisa izihambi kanye nokungezelelwa kwemali kuzofeza amakhamera we-CCTV amakhamera e-Bazaar ukufinyelela ekukhuleni okunamandla.
PHAMBI I-Baidu Wei ZEXI
Ingabe amarobhothi ikusasa lokuphepha? OLANDELAYO